Dota2Summer Event (Aghanim’s Labyrinth) ရောကျလာပွီ – Gaming Noodle
Dota2Summer Event (Aghanim’s Labyrinth) ရောကျလာပွီ
Aghanim ဟာ တဈခြိနျကတော့ အလှနျထူးခြှနျတဲ့ မှျောဆရာတဈယောကျဖွဈပွီး နတျဘုရားတဈပါးနီးနီး အစှမျးရှိသူလို့ လူတှကေ ဆိုကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဘယျလိုသဆေုံးသှားတယျဆိုတာကို ဘယျသူမှမသိဘဲ သူ့ရဲ့လကျစှဲတောငျ Aghanim’s Scepter ကိုတော့ သူ့ရဲ့သား Rubick က ကိုငျဆောငျခဲ့တယျ။ Rubick ဟာ သူ့တဈသကျလုံး ဖခငျရဲ့ အရိပျထဲမှာပဲ နထေိုငျခဲ့ပွီး ဖခငျရဲ့ ကြျောကွားမှုနဲ့ စှမျးရညျကို ကြျောလှနျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနပေမေယျ့ အခုထိ လိုကျမမီခဲ့သေးပါဘူး။
အခုတော့ Aghanim ပွနျရောကျလာခဲ့ပါပွီ! သပွေီလို့ ယူဆထားရတဲ့ Aghanim ဟာ Dimension တှကွေားမှာ ပြောကျဆုံးနတောဖွဈပွီး Dota2Realm ဆီကိုပွနျလာဖို့ စှမျးအားနဲ့ ဉာဏျပညာတို့ကို ပိုငျဆိုငျလာခဲ့ပွီ။ ဒါပမေယျ့ သူတဈယောကျတညျးပွနျလာတာတော့ မဟုတျပါဘူး။
Aghanim’s Labyrinth ဟာ အသဈထှကျလာတဲ့ Event တဈခုဖွဈပွီး ကစားသမားလေးယောကျက Co-op ပူးပေါငျးဆော့ကစားရမယျ့ Rogue-like RPG ဂိမျးစတိုငျလျပါ။ ဒါမြိုးက ရှမှေ့ာ Siltbreaker တို့ ဘာတို့မှာလညျး ဆော့ဖူးပွီး အခု ရနျသူတှကေလညျး Siltbreaker ထဲက ကောငျတှနေဲ့ Ability ကအစ တူညီပါတယျ။ Aghanim’s Labyrinth ကိုဆော့ဖို့ Battle pass မလိုပမေယျ့ Battle Pass ရှိတဲ့သူတှသော Battle Point အကြိုးခံစားခှငျ့ရမှာပါ။
ရှရေ့ကျက ဂိမျးထဲမှာ Aghanim’s Scepter ရဲ့ Logo ပုံကို ပွောငျးလဲလိုကျတဲ့ အဓိပ်ပါယျကို အခုသိခှငျ့ရပါပွီ။ Aghanim’s Labyrinth ထဲမှာ Aghanim’s Scepter ဝယျလို့မရပါဘူး။ ဟီးရိုးလညျး သူပေးထားတဲ့အထဲက ရှေးရမှာပါ။ အရေးကွီးတာက ပှဲဆော့ပွီးတိုငျး Arcane Fragments အပွာရောငျလေးတှေ ရပွီး Talent Tree ကို Upgrade လုပျဖို့ အသုံးပွုရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကို မမပေ့ါနဲ့။
အခုထိ ဆော့ပွီးသလောကျတော့ Siltbreaker နဲ့ဆငျတူပွီး တူညီတဲ့ Feature, Creeps တှေ ပါပမေယျ့ ပိုအာရုံစိုကျရပါတယျ။ Creep အသေးတှကေအစ အလှတျပေးလို့မရဘဲ MMORPG တှမှော Dungeon Raid ဝငျရသလိုပါပဲ။ ကနျြတာတှကေိုတော့ မရှငျးပွတော့ပါဘူး။ ဆော့သာကွညျ့လိုကျပါတော့။ Aghanim’s Labyrinth Event Page ကတော့ ဒီမှာပါ – http://www.dota2.com/aghanim
Dota2Summer Event (Aghanim’s Labyrinth) ရောက်လာပြီ
Aghanim ဟာ တစ်ချိန်ကတော့ အလွန်ထူးချွန်တဲ့ မှော်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နတ်ဘုရားတစ်ပါးနီးနီး အစွမ်းရှိသူလို့ လူတွေက ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဘယ်လိုသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှမသိဘဲ သူ့ရဲ့လက်စွဲတောင် Aghanim’s Scepter ကိုတော့ သူ့ရဲ့သား Rubick က ကိုင်ဆောင်ခဲ့တယ်။ Rubick ဟာ သူ့တစ်သက်လုံး ဖခင်ရဲ့ အရိပ်ထဲမှာပဲ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ဖခင်ရဲ့ ကျော်ကြားမှုနဲ့ စွမ်းရည်ကို ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် အခုထိ လိုက်မမီခဲ့သေးပါဘူး။
အခုတော့ Aghanim ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ! သေပြီလို့ ယူဆထားရတဲ့ Aghanim ဟာ Dimension တွေကြားမှာ ပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီး Dota2Realm ဆီကိုပြန်လာဖို့ စွမ်းအားနဲ့ ဉာဏ်ပညာတို့ကို ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ယောက်တည်းပြန်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Aghanim’s Labyrinth ဟာ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Event တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကစားသမားလေးယောက်က Co-op ပူးပေါင်းဆော့ကစားရမယ့် Rogue-like RPG ဂိမ်းစတိုင်လ်ပါ။ ဒါမျိုးက ရှေ့မှာ Siltbreaker တို့ ဘာတို့မှာလည်း ဆော့ဖူးပြီး အခု ရန်သူတွေကလည်း Siltbreaker ထဲက ကောင်တွေနဲ့ Ability ကအစ တူညီပါတယ်။ Aghanim’s Labyrinth ကိုဆော့ဖို့ Battle pass မလိုပေမယ့် Battle Pass ရှိတဲ့သူတွေသာ Battle Point အကျိုးခံစားခွင့်ရမှာပါ။
ရှေ့ရက်က ဂိမ်းထဲမှာ Aghanim’s Scepter ရဲ့ Logo ပုံကို ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အခုသိခွင့်ရပါပြီ။ Aghanim’s Labyrinth ထဲမှာ Aghanim’s Scepter ဝယ်လို့မရပါဘူး။ ဟီးရိုးလည်း သူပေးထားတဲ့အထဲက ရွေးရမှာပါ။ အရေးကြီးတာက ပွဲဆော့ပြီးတိုင်း Arcane Fragments အပြာရောင်လေးတွေ ရပြီး Talent Tree ကို Upgrade လုပ်ဖို့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို မမေ့ပါနဲ့။
အခုထိ ဆော့ပြီးသလောက်တော့ Siltbreaker နဲ့ဆင်တူပြီး တူညီတဲ့ Feature, Creeps တွေ ပါပေမယ့် ပိုအာရုံစိုက်ရပါတယ်။ Creep အသေးတွေကအစ အလွတ်ပေးလို့မရဘဲ MMORPG တွေမှာ Dungeon Raid ဝင်ရသလိုပါပဲ။ ကျန်တာတွေကိုတော့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ဆော့သာကြည့်လိုက်ပါတော့။ Aghanim’s Labyrinth Event Page ကတော့ ဒီမှာပါ – http://www.dota2.com/aghanim